Iziphumo zeLottery, iiJackpots kunye neenombolo | I-Lottery.com
I- $ 336 MILLION
Uqikelelo lweJackpot-Meyi 29, 2020
Dlala ilottery kwifowuni yakho!
Landela amatikiti akho, ufumane izaziso xa uphumelele, kwaye udlale ekuhambeni. Funda okungakumbi malunga neapp.
DLALA NGOKU or
okanye ufunde ngakumbi malunga neapp yethu
kude kube ngumzobo olandelayo
I- $ 114 MILLION
I- $ 2.8 MILLION
See Latest Lottery Results >>
Khetha iinombolo zakho
Fumana amatikiti akho
Qokelela iiMpumelelo zakho
Khetha Umdlalo owuthandayo
Ungadlala i-Powerball, Mega Million, kunye nemimandla yethu apho sihlala khona! Unokufumana iinombolo zokuphumelela, uzobe imihla, kunye namanqanaba e-jackpot kumakhulu eminye imidlalo ye-lottery.
Khetha iinombolo zakho zenhlanhla
Dlala iinombolo zakho zethamsanqa okanye ufumane ngokukhawuleza kwiimpompo ezimbini. Thepha, Thepha, iTikiti!
Thenga ukuya kuthi ga kwiitikiti ezingama-50 ngexesha. Siza kuphatha yonke into ukusuka apho kwaye sikwazise xa uphumelela!
Qokelela YONKE IIMFAZO zakho
Gcina i-100 yeepesenti zakho eziwinileyo! Ukuwina kwakho kuya kuhlala kubhalansi yakho ukuze udlale ngakumbi amatikiti okanye ucele imali. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukubetha i-jackpot enkulu, siya kukunxibelelana kwaye sikuncede ngenkqubo yokuhlenga.
Ngaba ukulungele ukuqalisa ukudlala?
Khuphela usetyenziso lweLottery.com kwiVenkile yeWindows okanye Ivenkile yeGoogle Play. Seta iakhawunti yakho ukuze uqale ukudlala ngaphakathi komzuzu!
Indlela engcono yokuDlala iLottery
Yonke Imidlalo oyithandayo
Ukuba ukwelinye lawona mazwe aphantsi kwethu ungadlala i-Powerball yenyani kunye nezigidi zeMega ngqo kwisixhobo sakho esiphathwayo usebenzisa i-Lottery.com app.
I-Lottery.com iqinisekisa ukhuseleko ngokusebenzisa itekhnoloji ekhokelela kushishino eqinisekisa ubuwena, ubudala, nendawo yakho ukubonelela ngamava elotho akhuselekileyo nelona likhuselekileyo.
Fumana onke amanqaku akho awisiweyo angeniswe kwiakhawunti yakho yebhanki, ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo, xa uthe waphumelela! Ugcina ipesenti ye-100 yephumeleleyo lakho!
"So happy I found this app! I get direct notifications for results, so no more hunting around and trying to find them. I can also get alerts when the jackpot reaches a certain level."
"Kudala ndisebenzisa le app iinyanga ezininzi kwaye ndiyithatha njengenye yezona ndlela zilungileyo zokukhangela i-lottery apha.
"Inkonzo yabo yabathengi iyamangalisa kakhulu. Nantoni na endiyifunayo, baphendula ngokukhawuleza kwaye bandicacisele yonke into ngokucacileyo. Enkosi kakhulu."
"This app is really suitable for people who play the lottery. It helps us save so much time; you can buy tickets online and easily check the results."
Ulwazi kwi Imidlalo yokudlala efanelekileyo kwaye ingxaki yokudlala ikhona. Okanye tsalela umnxeba i-1-800-522-4700.
Fumana iLottery.com App
Imibuzo yoMbutho weLottery
Iziphumo zoNgcakazo lweLizwe
Ilayisensi Idatha yethu
Umgaqo-nkqubo wokudlala oxanduva